Cali Ameeriko ku dhawaad lix kun oo ruux ayaa dib ugu laabatay dalka bishaan gudaheeda. | Somalisan.com Home
Cali Ameeriko ku dhawaad lix kun oo ruux ayaa dib ugu laabatay dalka bishaan gudaheeda.
12/31/2012 3:40:00 Safiirka oo Maanta shir jaraa�id u qabtay warbaahinta ayaa cadeeyay in is badalka ka dhacay dalka keentay in inta badan dadkuu ku sugnaa dalka Kenya dalkooda
Safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Mudane Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa shaaca ka qaaday In bishaan gudaheeda dalka dib ugu laabteen ku dhawaad lix kun oo ruux.
Safiirka oo Maanta shir jaraa’id u qabtay warbaahinta ayaa cadeeyay in is badalka ka dhacay dalka keentay in inta badan dadkuu ku sugnaa dalka Kenya dalkooda .
“ilaa lix kun oo ruux ayaa bishaan gudaheeda dib ugu laabtay gudaha dalka iyada oo aan jirin wax caburin ah”ayuu yiri Safiirka.
“waxaa na soo gaarayay maalmihii ugu dambeeyay codsiyo dadka ku doonayaan in gudaha dalka ku laabtaan safaaradana kaalin xoog leh ayay ka qadatay in loo fududeeyo warqadaha ay dib ugu laabanayaan”ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
“warkaasi waa mid been abuur ah dumarka ixtiraam gaar ah ayay safaaradu siisaa waxaana howlaha la xiriira sawirka iyo fududeynta baasaboorka u qaabilsan dumar safaarada ka shaqeeya mana jirto wax dhibaato ah oo ay la kulmaan”ayuu yiri Safiir Ameeriko.